ဓားတောင်ကိုကျော် မီးပင်လယ်ဖြတ်ဦးမှာ ...။
ခင်ဗျားကို မိုက်တယ် ပြောတာပေါ့
အင်္ဂါထောင့်က စောင့်နေကြတယ် အနော်။
အမှတ်တရ ဖယောင်းတိုင်တွေ ဝေငှပါလိမ့်မယ်။
Active and sensitive poem.
She said (Dassk is walking on her way but we are walking on our way.).
Which point they w'll meet together?????????.
ဒေါ်နော်အုံးလှကိုဖမ်းထားတာကတော. နိုင်ငံ.သိက္ခာ ၊
လွှတ်တော်သိက္ခာ ကျဖို.ဘဲရှိပါတယ် ။
ကိုယ်စီးတဲ့မြင်း အထီးမှန်းမသိ၊ အမမှန်းမသိ အထက်ဖား အောက်ဖိ၊ အာဏာရူုးဖို့လောက်ပဲ သိတဲ့ ဒီလိုလူတွေမှာ စဉ်းစားဥာဏ်၊ ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုတာ အဝေးကြီးမှာပါ။ သိက္ခာဆိုတာ ဘာမှန်းတောင်မသိတဲ့ အရူးတွေ။
မြန်မာအချင်းချင်း ဖိနှိပ်၊ ညှင်းစဲ၊ ဗိုလ်ကျရတာကို ခံတွင်းတွေ့နေတဲ့ ဖက်ဆစ်စရိုက် အာဏာရူးတွေ မသေခင်မှာကို ခွေးဖြစ်လိမ့်မယ်...